Tuhun laga qabo in Golaha Shacabka uu sameysto muddo kororsi 2 sano ah - Jowhar Somali news Leader
Home News Tuhun laga qabo in Golaha Shacabka uu sameysto muddo kororsi 2 sano...
Waxaa labadii maalmood ee la soo dhaafay isa soo tarayay hadal heyn ku aadan in Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka inuu sameysto muddo kororsi 2 sano, xilli muddo xileedkiisa uu ka harsan yahay afar bilood.
Shirar gaar gaar ah oo maalmihii la soo dhaafay lahaayeen Xildhibaannada ayaa shaki weyn dhaliyay, kaddib markii qaar ka mid ah Xildhibaannada ay sheegeen in Baarlamaanka bedeli kara oo kaliya uu yahay mid la soo doorta, iyagoo taageeray doorasho qof iyo cod ah oo dalka ka dhacda.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya inay jiraan Xildhibaano dhowr ah oo wada olole ku aadan mooshin muddo kororsi ah.
Kulanka maanta uu yeelanayo Golaha Shacabka ayaa tuhun laga qabaa inuu mar qura ajandihiisa is bedelo, si la mid ah qaabkii loo riday Ra’iisul Wasaarihii hore Xasan Cali Kheyre oo ajandaha aan ku jirin markii codka kalsoonida loo qaadayay Xukuumaddiisa.
Xildhibaannada Golaha shacabka ayaa xalay farriin qoraal loogu diray ajandaha kulanka maanta oo Sabti ah ay yeelanayaan oo ah Akhrinta koowaad ee Sharciga Dambiyada Galmada la xiriira.
25-kii bishii hore ee July ayay aheyd markii Xildhibaannada farriin qoraal loogu diray Ajandaha kulanka ka doodista Doorashooyinka 2020/21 uu mar qura isu bedelay kalsooni u qaadista Xukuumadda, waxaana durbadiiba si fowdo iyo buuq ku jira loo riday Xukuumaddii uu hoggaaminayay Ra’iisul Wasaarihii hore Xasan Cali Kheyre.
Si kastaba ha ahaatee waxaa la is weydiinayaa sharci ahaanshaha Golaha Shacabka in keligiis uu muddo kororsi sameysto, iyadoo aanu qeyb ka aheyn Golaha Aqalka Sare.